Seenetarri Amerikaa Yukreeniif Gargaarsii Akka Hin Kennamneef Sagalee Kennan
Caamsaa 13, 2022
Seenatar Yunaaytid Isteets kan ta’an Rand Pool, Waashingitan Diisii
Seenatara Yunaaytid Isteets kan ta’an Rand Pool gargaarsa silaa Yukreeniif kennamuu kan doolaara biliyoona 40 akk hin kennamneef sagalee kennaniin kuffisan.
Kunis yukreen Raashaa waliin wal waraansa gaggeessituuf hatatamaan gargaarsa dabalataa erguuf yaalii ta’u duubatti harkisee jira.Dinagdee Yunaaytid Isteetes mancaasaa Yukreeniin oolchuu hin dandeenyu jedhan pool.
Seeneeti Yunaaytid Isteetes sagalee guutuun raggaasisuun silaa gargaarsa Yukreeniif ergamu hatattamaan akka dhaqqabu ariifachiisa ture.Tarkaanfiin pool fudhatan kun,torban ka biraa kan seeneetnii seera raggaasiisa jedhame eegamuutti sagalee hanga kennuutti akka harkiifatu taasisee.
Yukreen akka jettutti looltoota ishee 38 kanneen warshaa sibiilaa Azovstal isa Mariipuul keessa jiranii fi lammiwwan Raashaa hidmanii jiran wal jijjiruuf mariin gaggeeffamaa jira.
Mariin kun akkaan rakkisaa ta’u itti aantuun mummicha ministeeraa Ereenaa vereschuk face buuk irratti maxxansanii jiru.Namoota siyaasaa, gaazexeessootaa f namoota beekamoo hanga tokko biraa marii kanaa yaadii dhiyaatu marii gaggeeffamu kan miidhe ta’u ibsanii namoonni waan hin beekne irratti ifatti yaada kennuu irraa of qusachuu qabu jedhan.
Prezidaantii fi mummichi ministeera Fiinland kamiisa kaleessaa biyyi isaanii Neetootti akka dabalamtuuf mirkanii laatanii jiru. Kun immo biyyi isaanii weerara Raashaan Yukreen irratti gaggeesiteef, biyyattiin jijjiirama polisii guddaa gochuu ishee agarsiisa.